Faah Faahino kasoo baxaya dil ka dhacay Muqdisho iyo Al shabaab oo ka hadashay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Faah Faahino kasoo baxaya dil ka dhacay Muqdisho iyo Al shabaab oo...
Faah Faahino kasoo baxaya dil ka dhacay Muqdisho iyo Al shabaab oo ka hadashay
Kooxo biskoolado ku hubeesan ayaa xalay gudaha Farmashi kuyaala agagaarka xaafada KPP ee Degmada Hodan waxa ay ku dileen nin dhalinyaro ah oo la sheegay in uu ka shaqeenayay goobta lagu dhax dilay.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in raga dilka geestay iska dhigeen kuwa daawo ka iibsanaya farmashiga kadibna rasaas la dhacay ninkii farmashiga gadayay, dilka kadib ayaana kooxdaasi goobta isaga baxsadeen.
Ciidamo katirsan booliiska saldhiga degmada Hodan ayaa soo gaaray goobta dilku ka dhacay, mana ku guuleesan ciidankaasi in ay gacanta kusoo dhigaan ragii dilka fuliyay oo goobta ka baxsaday kahor inta aysan ciidanka halkaas gaarin.
Warbaahinta Al Shabaab ayaa war lagu baahiyay lagu sheegay in ninka la dilay oo magaciisa lagu sheegay Feysal Maxamed uu ahaa sargaal katirsanaa ciidanka dowlada, mana faah faahin Al Shabaab halka uu sargaalka ka ahaa ninkan.
Magaalada Muqdiaho ayaa u muuqata mid Amnigeeda Faraha ka sii baxayo
Previous articleAlshabaab oo Gaari Dhuxul sidaa ku gubay Duleydka Degmada Afgooye
Next articleDetails emerge from killings in Mogadishu and Al Shabaab speaks
Madaxweyneyaasha Galmudug, Koonfur galbeed iyo Hirshabelle oo ku kusoo biiraya ...